Ny Fahitan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Fombafomba Amin’ny Fandevenana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Féroïen Galicienne Galoà Garifuna Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kachin Karen (S'gaw) Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tarasque Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Tseky Turkmène Twi Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Ahoana no Fahitan’ny Vavolombelon’i Jehovah An’ireo Fombafomba Atao Amin’ny Fandevenana?
Izay mifanaraka amin’ny Baiboly ihany no ekenay sy arahinay. Anisan’izany ireto:
Ara-dalàna ny hoe malahelo rehefa misy havana maty. Nalahelo ny mpianatr’i Jesosy rehefa nisy havany na namany nodimandry. (Jaona 11:33-35, 38; Asan’ny Apostoly 8:2; 9:39) Tsy manao fety àry izahay rehefa misy maty. (Mpitoriteny 3:1, 4; 7:1-4) Miara-ory amin’izay nidonam-pahoriana kosa izahay.—Romanina 12:15.
Tsy mahalala na inona na inona ny maty. Misy mino hoe mahatsiaro tena ny maty ary mitahy na manisy ratsy ny velona. Tsy mampianatra an’izany anefa ny Baiboly, ka tsy manao fombafomba mifandray amin’izany izahay, na inona na inona fiavianay na kolontsainay. (Mpitoriteny 9:5, 6, 10) Anisan’izany ny hoe miandry faty, manao fety na manao sorona ho an’ny maty, mamadika, miresaka amin’ny maty sy mangata-pitahiana aminy, ary manao an’ireo fombafomba takina amin’ny vady navelan’ny maty. Tsy manao an’ireo rehetra ireo izahay, satria mankatò an’ilay didy hoe: “Misaraha aminy ... ary aza mikasika intsony izay maloto.”—2 Korintianina 6:17.
Mbola ho velona indray ny maty. Milaza ny Baiboly fa mbola hitsangana ny maty ary hofoanana ny fahafatesana. (Asan’ny Apostoly 24:15; Apokalypsy 21:4) Tsy manao zavatra tafahoatra àry izahay rehefa misy havana maty. Tsy nanao an’izany koa ny Kristianina voalohany.—1 Tesalonianina 4:13.
Milaza ny Baiboly fa ilaina ny manetry tena. (Ohabolana 11:2) Tsy fotoana “fampideraderana” fananana àry ny fotoam-pandevenana aminay, sady tsy fotoana anindrahindrana saranga. (1 Jaona 2:16) Tsy manao fandevenana manetriketrika be izahay mba hampifaliana olona. Tsy mampanao vatam-paty lafo be koa izahay, na manao akanjo misarika maso loatra.
Tsy terenay hanaraka ny zavatra inoanay ny hafa. “Samy hataon’Andriamanitra ampamoaka [mantsy] isika tsirairay avy.” (Romanina 14:12) Miezaka manazava ny zavatra inoanay anefa izahay rehefa misy manontany, ary ataonay “amim-pahalemem-panahy sy amim-panajana lalina” izany.—1 Petera 3:15.
Ahoana no ataon’ny Vavolombelona rehefa mikarakara fandevenana?
Toerana: Raha mangataka ny hanaovana lahatenim-pandevenana ilay fianakaviana mana-manjo, dia mety hatao any amin’ny Efitrano Fanjakana izany, na any an-tranony, na any amin’ny toerana handoroana an’ilay faty, na eny am-pasana.
Lahatenim-pandevenana: Atao hampaherezana an’ireo nidonam-pahoriana izy io. Hazavaina amin’io lahateny io hoe inona no lazain’ny Baiboly momba ny maty sy ny fitsanganana amin’ny maty. (Jaona 11:25; Romanina 5:12; 2 Petera 3:13) Mety horesahina koa ny toetra tsaran’ilay olona nodimandry, indrindra fa ny modely navelany tamin’izy nanompo an’Andriamanitra.—2 Samoela 1:17-27.
Mety hisy hira hatao koa amin’io fotoana io, ary avy ao amin’ny Baiboly ny hevitra resahin’ilay tononkira. (Kolosianina 3:16) Avy eo, dia faranana amin’ny vavaka mampahery ilay lahateny.—Filipianina 4:6, 7.
Rakitra: Tsy mitaky vola amin’ny mpiara-mivavaka aminay izahay rehefa mampanao fotoam-pivavahana, anisan’izany ny lahatenim-pandevenana. Tsy mitanty rakitra koa izahay rehefa miara-mivory mba hianatra Baiboly.—Matio 10:8.
Mpanatrika: Raisinay an-tanan-droa ny olona tsy Vavolombelon’i Jehovah tonga hihaino lahatenim-pandevenana any amin’ny Efitrano Fanjakana. Azon’ny rehetra atrehina mantsy ilay izy, hoatran’ny fivoriana hafa alaminay ihany.
Ahoana raha fivavahana hafa no mandamina an’ilay fandaharana? Mahazo manatrika azy io ve ny Vavolombelona?
Anjaran’ny tsirairay ny manapa-kevitra raha hanatrika izy na tsia. Miankina amin’ny feon’ny fieritreretany efa nampiofanin’ny Baiboly izany. (1 Timoty 1:19) Tsy mandray anjara amin’ny fombafomba ara-pivavahana mifanohitra amin’izay lazain’ny Baiboly anefa izahay.—2 Korintianina 6:14-17.